Sida loo gooyo sawirka goobada: Casharrada iyo barnaamiyada beerista | Hal-abuurka Online
Imaatinka barnaamijyada cusub iyo software, waxaa suurtagal ah in la sameeyo tiro aan dhammaad lahayn oo ah khiyaamo fudud oo la isku dari karo oo waxtar u leh mashaariicdayada. Laga soo bilaabo tafatirka sawirada ilaa lagu maareeyo si aan halabuurkeena uga dhigi karno wax cajiib ah.
Taasi waa sababta qoraalkan, waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa cashar gaaban, oo ku saabsan sida loo gooyo sawirka qaab wareeg ah. Maxaa intaas dheer, Waxaan ku tusi doonaa dhowr qalab oo bilaash ah oo loo isticmaali karo layliga aan maanta soo jeedinayno. Waa mid aad u fudud, kaliya waa inaad diyaar u tahay PC-gaaga iyo barnaamijka aan hoos ku tilmaami doonno.
1 Ku dalag sawirka qaab wareeg ah
1.1 Ku dar sawirka
1.2 Wax ka beddel qaabka
1.3 Ku habboon sawirka qaabka
2 Barnaamijyada sawir abuurka
2.5 Tafatiraha Pixlr
Ku dalag sawirka qaab wareeg ah
Si aad u bilowdo casharka soo socda, waxaad u baahan doontaa inaad furto barnaamijka Microsoft Word ka dibna:
Tag ikhtiyaarka Gelida > imagen si loogu daro sawirka faylka Xafiiska (sida dukumeenti Word, bandhiga PowerPoint, ama faylka fariinta iimaylka Outlook).
Guji sawirkaWaxaad isku mar gooyn kartaa sawirro badan, laakiin waa inaad u samaysaa qaab isku mid ah. Laakin Word, aad ayey u dhib badan tahay maadaama aadan dooran karin sawirro badan oo leh ikhtiyaarka caadiga ah ama khadka tooska ah oo leh dqoraalka naqshadeynta.
Markaas dhagsii Qalabka sawirka > Foomkaato, iyo kooxda cabbirka, guji taariikhda hoosteeda Dalagga.
Liiska soo muuqda, guji Ku jar qaabka ka dibna ku dhufo qaabka aad rabto inaad gooyso. Qaabka ayaa isla markiiba lagu dabaqaa sawirka.
Kadib isticmaal ikhtiyaarka Dalagga > Taam ah ama Dalag >Buuxi si aad u bedesho cadadka sawirka ku habboon gudaha qaabka aad codsatay:
Buuxinta: Ku buuxi qaabka oo dhan sawirka. Qaar ka mid ah geesaha dibadda ee sawirka ayaa laga yaabaa in la gooyo. Ma jiri doonto meel bannaan oo ku taal geesaha qaabka.
hagaaji: Ka dhigayaa in sawirka oo dhan ku habboon yahay qaabka iyadoo la ilaalinayo saamiga asalka ah ee sawirka. Waxaa laga yaabaa inay bannaan tahay geesaha qaabka. Gacmaha dalagga madow waxay ka muuqdaan cidhifyada iyo geesaha sawirka marka aad doorato ikhtiyaarka Fit ama Buuxi.
Waxaad hagaajin kartaa booska sawirka dhexdiisa adigoo dooranaya sawirka oo u jiidaya meel kasta oo aad rabto. Tusaale ahaan, tani waxay kaa caawin kartaa inaad udub dhexaad u noqoto qaybta ugu muhiimsan ee sawirka qaabka aad u maqashay sawirka.
Meesha ugu dambeysa, gooyaa cidhifyada sawirka jiidaya gacan-jaridda madow.
Ku dar sawirka
Marka aan naqshadeyno qaabka, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in lagu daro sawirka oo la galiyo, tan:
Ku dar qaabka dukumeentigaaga, dabadeed riix qaabka si aad u doorato.
Guji Qalabka sawirista > Qaabka, iyo kooxda Qaababka Qaababka, dhagsii Qaabka Buuxinta> Sawirka.
Dooro nooca sawirka aad rabto inaad u isticmaasho Laga soo bilaabo feyl o Sawirada Onlineka ka dibna u tag sawirka aad rabto oo geli.
Wax ka beddel qaabka
Xigasho: GFC Global
Si aad u bedesho cabbirrada qaabka la buuxiyay iyadoo la ilaalinayo qaabkeeda aasaasiga ah, dooro oo jiid mid ka mid ah gacan-qabsiga cabbirka.
Ku habboon sawirka qaabka
Haddii sawirku qalloocan yahay, la jeexjeexay, ama aanu u buuxin qaabka aad rabto, isticmaal qalabka ku haboon oo Buuxi ee ku jira menu dalagga si aad ugu habboonaato.
Guji qaabka lagu sameeyay Buuxinta Qaabka> Sawirka.
Guji Qalabka Sawirka> Qaabka, iyo kooxda cabbirka, dhagsii falaarta hoosteeda Dalagga. ka dibna menu leh xulashooyinka goosashada ayaa la soo bandhigi doonaa.
Xullo Hagaaji haddii aad rabto in sawirka oo dhan uu ku habboon yahay qaabka; Saamiga dhinaca sawirka asalka ah waa la hayn doonaa, laakiin meel banaan ayaa laga yaabaa in lagu dhex abuuro qaabka.
Xullo Buuxi si qaabku ugu habboonaado xuduudaha sawirka oo laga gooyo wax kasta oo ka baxsan qaabka.
Guji Buuxi ama Habboon
Buuxi Dejiya cabbirka sawirka si uu u dhigmo dhererka ama ballaca qaabka, hadba kan weyn. Ficilkani wuxuu buuxinayaa qaabka sawirka wuxuuna ka saarayaa wax kasta oo ka baxsan wareegga qaabka.
Hagaaji Wuxuu dejiyaa cabbirka sawirka si dhererka iyo ballaca sawirku u waafajiyo xuduudaha qaabka. Tani waxay ku duubtaa sawirka intii suurtogal ah ee qaabka, laakiin meelaha qaarkood ee qaabka ayaa laga yaabaa in laga tago faaruq.
Barnaamijyada sawir abuurka
Codsiga isha furan ee Krita, ku habboon dhammaan goobaha, Waa natiijadii geeddi-socod horumarineed oo hal sano ah oo bilaabmay 1998 iyadoo rabitaanka la abuurayo beddelka waxa aan u naqaanno GIMP, oo ku salaysan maktabadda Qt. Sababo kala duwan dartood, mashruucii asalka ahaa ayaa laga tagay, taa beddelkeedana barnaamij cusub oo tafatirka sawirka madax-bannaan ayaa la sameeyay ilaa nuqulkii ugu horreeyay ee Krita uu ugu dambeyntii ka soo muuqday suuqa 2004 oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah software-ka xafiiska KOffice.
Sanadihii la soo dhaafay, horumariyaheedu waxa uu diiradda saaray qalabaynta iyo ayaa barnaamijka u beddelay mid ka mid ah xalalka il furan ee ugu wanaagsan ee sawir-qaadayaasha, sawir-qaadayaasha iyo farshaxan-yahannada fikradda iyada oo aan lumin aragtida muuqaalka tafatirka sawirka caadiga ah.
Waanu naqaan Photoshop oo waanu la xidhiidhnaa barnaamijyada ama codsiyada lagu saxayo sawirada iyo isticmaalayaasha loo hagayo qaybta naqshadaynta garaafyada. Doorashadan qeexan waxaa loogu talagalay xirfadlayaasha, si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay qiimo aad u sarreeya, sidaas darteed taageerayaal badan oo sawir-qaadista iyo naqshadeynta garaafka waxay door bidaan beddelaadyo la awoodi karo.
Tafatiraha Express, Adobe waxa uu soo bandhigay barnaamij tafatir sawireed oo bilaash ah oo ah codsi shabakad ku salaysan Flash muddo sannado ah hadda, sidaa darteed waxa la isticmaali karaa oo keliya haddii aad Flash Player ku rakibtay. Intaa waxaa dheer, codsigan tafatirka sawirka bilaashka ah wuxuu ku habboon yahay IOS, Android iyo Windows Phone waxaana lagala soo bixi karaa dukaamada app-ka ee u dhigma.
Ilaa 2010, Gábor Horvàth's RawTherapee sawir tafatirka barnaamijka waxay hoos timaadaa shatiga GNU GPL. Appkan tafatirka sawirku maaha bilaash oo kaliya, laakiin sidoo kale il furan, si loo isticmaalo oo wax laga beddelo iyada oo aan xaddidnayn. Codsigu waxa uu leeyahay qaab-ku-dhisan oo ah software-ka beddelka dcraw, kaas oo kuu ogolaanaya inaad soo dejiso oo aad wax ka beddesho sawirrada xogta aasaasiga ah (waxa loogu yeero xogta RAW) ee kamaradaha dhijitaalka ah.
Iyada oo tan, aaladda waxaa inta badan loogu talagalay sawir qaadayaasha xirfadleyda ah iyo kuwa hiwaayadda u ah ee doonaya inay ka faa'iidaystaan ​​​​sawirkooda. RawTherapee sidoo kale waxay taageertaa JPEG, PNG, ama TIFF, si isticmaalayaashaadu sidoo kale ula shaqeeyaan qaababkan sawirka.
Sannadkii 1998dii waxaa soo baxday daabacaaddii ugu horreysay ee rasmiga ah ee GNU (Barnaamijka wax-is-daba-marinta sawirka), oo loo yaqaan GIMP. Maanta waa wax aan muran lahayn in software-ka ay sameeyeen Peter Mattis iyo Spencer Kimball uu yahay mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirka ugu wanaagsan ee il furan.
Waxay ku salaysan tahay Maktabadda Garaafyada Guud (GEGL). GIMP waxa ay noqotay tartan hal-joojin ah oo loogu talagaly tayaynta muuqaalka iyo tafatirka hooska barnaamijyada lacag bixinta. Asal ahaan loogu talagalay GNU / Linux, barnaamijku wuxuu sidoo kale la shaqeeyaa dhammaan nidaamyada Windows iyo macOS.
Anderson waxa uu daabacaa barnaamijka tafatirka sawirka Pixlr-ku-saleysan ee 2008. Maanta wuxuu la shaqeeyaa Autodesk wuxuuna ku daabacaa halkaas noocyada mobilada ee barnaamijkiisa si uu u saxo sawirada iOS iyo Android, iyo kuwo kale. Codsiga shabakadda waxa loo isticmaali karaa bilaash dhammaan daalacayaasha iyada oo aan loo baahnayn in la diiwaan geliyo, si kastaba ha ahaatee, in Adobe Flash Player la rakibay, maadaama barnaamijku leeyahay walxo Flash kala duwan. Pixlr Express waa nooc miisaan yar oo loogu talagalay tayaynta sawirka hoose.
Wuxuu ka bilaabay mashruuc arday yar oo ka tirsan Jaamacadda Gobolka Washington, Paint.NET waa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka sawirada ugu fiican ee saaxadda freeware. Ka dib markii lagu sii daayay 2004 iyadoo hoos timaada shatiga MIT ee bilaashka ah, hadda waxaa lagu suuqgeeyaa shatiga lahaanshaha. Qaab dhismeedka aasaasiga ah ee codsigu waa qaabka Microsoft .NET, oo si toos ah loogu daro rakibaadda. Maadaama qaab-dhismeedku uu la shaqeeyo Windows, Paint.NET looma hayo aaladaha kale.
Maxay ahayd beddelka halbeegga fudud ee barnaamijka Rinjiga Microsoft si joogto ah ayaa loo sameeyay sannadihii la soo dhaafay, sidaas darteed waxay sidoo kale ku habboon tahay hawlaha horumarsan. A) Haa, Suurtagal ma aha oo kaliya in lagu shaqeeyo dhowr lakab, laakiin sidoo kale in la farsameeyo mashaariic dhowr ah oo isku mid ah kuwaas oo u furan tabs kala duwan.
In sawirka la gooyo oo la geliyo waa mid ka mid ah leyliga ugu fudud, haddii aad haysatid barnaamijyo ay ka mid yihiin Word iyo kuwa aan soo jeedinnay, kuwa soo socdaa horumarkoodu dhib kuguma aha.
Taasi waa sababta aan kuugu martiqaadeyno inaad tijaabiso qaar ka mid ah qalabka aan soo sheegnay oo aad u gudubto tacabur.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo gooyo sawirka goobada
Apps si wax looga tirtiro sawirada